အပြည့်အဝသတ်မှတ်ချက်များကိုသက်ဆိုင်ပါသည်။ ဒီအမြှင့်တင်ရေးမှဘာသာရပ်ဖြစ်ပါသည်ဆုကြေးငွေမူဝါဒက အခုတော့ Play
ခရက်ဒစ်နှင့် Debit Card
Contact & Support: for any issues concerning your credit/debit cards, please contact our support။
တစ်ဦးက15% processing fee will be deducted from all Deposits made by PayviaPhone.
SOFORT offersasecure and convenient way of paying online. You can pay withinasecure online banking environment of your own bank. Pay simply with an innovative system, the way you usually pay bills with online banking. Find out more info at https://www.sofort.com/။
GIROPAY offers usersasafe and secure way of paying online. You can pay continently through an online banking environment of your own bank. Pay fast and simply https://www.giropay.de/။
If you have any problems with depositing funds, don't worry, you can contact one of our highly trained Customer Service representative between 7:00 AM - 11:00 AM (GMT) by email or online chat - ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ။
Olorra လီမိတက် CASHOO.EU
SlotJar.com will not acceptadeposit fromaregistered player contrary toalimit set for that player under this Part. ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ for self limitation.
SMS ကိုကာစီနို | £ 200 Deposit အပိုဆု | £ $ €အနိုင်ရရှိတဲ့သိမ်းဆည်းထားပါ
အွန်လိုင်းကာစီနိုတယ်လီဖုန်းဘီလ် | အခမဲ့£ 200 အပိုဆု - နိုင်ပွဲများကိုသိမ်းဆည်းထားပါ
Depositing နည်းလမ်းများ | ကဒ်ဖုန်းဘီလ် & ပို!
SlotJar.com အဆင့်3ProgressPlay လီမိတက် (suite ကိုအဘယ်သူမျှမ။ 1258), မျှော်စင်စီးပွားရေးစင်တာမျှော်စင်လမ်း, Swatar, Birkirkara, BKR 4013, မော်လ်တာအားဖြင့် operated ဖြစ်ပါတယ်။ ProgressPlay မော်လ်တာ (C58305) တွင်မှတ်ပုံတင်ထားသောကန့်သတ်တာဝန်ယူမှုကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်, ထိုမော်လ်တာဂိမ်းအာဏာပိုင်များကလိုင်စင်နှင့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်တာဖြစ်ပါတယ် နှင့် 2013 ခုနှစ်, 16 ဧပြီအပေါ်ထုတ်ပေး MGA / B2C / 231/2012 ၏လိုင်စင်နံပါတ်အောက်မှာလည်ပတ်; နှင့်နေဖြင့်လိုင်စင်နှင့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်တာဖြစ်ပါတယ် လောင်းကစားကော်မရှင်, License Number 000-039335-R-319313-015. Persons from Great Britain wagering via the website are doing so in reliance on the license issued by the Gambling Commission. Gambling can be addictive. Play responsibly.
မူပိုင်ခွင့်© SlotJar။ မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး။